မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) September 29, 2011 at 9:18 PM
ငါ့ကောင်မလေးချစ်သုဝေပါတာပေါ့နော် အလဲ့ ခြေထောက်နာနာနဲ့လာလိုက်တာ အတော်လေးရောက်လာပါရော တမီးစံ တစ်ယောက်
အဆင်ပြေစွာနဲ့အတင်းတွေ..အဲမှားလို့သတင်းတေါ ထောက်လှမ်းနိုင်ပါ
ခင်မင်စွာဖြင့် တမီးစံ ၇ဲ့ အိုဘစံ
မောင်ဘုန်း September 29, 2011 at 9:54 PM
အပျိုကြီး က... သတင်းထောက် လည်း လုပ်တာပဲနော် ...
ယဉ်မွန် September 29, 2011 at 10:09 PM
I read your blogger journalist. Try to go outside withoutacompanion.I think you can beagood author! Work hard!
AH September 29, 2011 at 10:20 PM
ဒီလို တက်တက်ကြွကြွ လုပ်နေတဲ့ အစုအဖွဲ့ကို တက်ကြွစွာ သွားရောက်ပြီး သတင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် အခု ဖတ်ခွင့်ရအောင် တင်ဆက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
jasmine(တောင်ကြီး) September 29, 2011 at 10:43 PM
မောင်မောင် September 30, 2011 at 1:39 AM
အားမနာပါဘူး။ သတင်းထောက်ငှားချင်လို. အန်တီမိမိစံ ရေ ၊ နောက်ဆိုရင်ဆက်သွယ်မယ်နော် ဟဲဟဲ
san htun September 30, 2011 at 8:21 AM
အသေအချာ သတင်း ထောက်ထားတာပဲ...
တောက်ပကြယ်စင် September 30, 2011 at 10:23 AM
မနေ့ည လာသေးတယ်။ ကွန်နက်ရှင်ကလေ ခရုနဲ့ နင်လားငါလားပဲ သိလား။ ပြီးတော့ လှိုင်းလိုပဲ တက်လိုက်ကျလိုက်နဲ့ဆိုတော့ ဘာမှ လုပ်မရဘူး။ ဟီး။ အပျိုကြီး မိစံ နေကောင်းတယ်မလား။ မောင် (စွယ်စုံကျမ်း) ရှိသလို မိစံ (စွယ်စုံရလည်း ရှိသပေါ့နော်)။ ရွာသာကြီးကို ပို့ထားရတဲ့ ခနက်ရှင်ကို ပြန်ယူပီးပြီလား?
မဒမ်ကိုး September 30, 2011 at 11:42 AM
အရင်ဦးဆုံး ဂျူဒိုကရာတေးအပြင် အပြေးလဲလေ့ကျင့်ထားပါ.
မဒိုးကန်ကတော့မပြေးနိုင်လို့ သတင်းထောက်မလုပ်ဘူးကွယ် ဟဲဟဲ
mstint September 30, 2011 at 1:43 PM
သတင်းထောက်လေး သမီးစံရေ။ အရည်အချင်းအပြည့်ပါပဲ။
တီတင့်လည်း သတင်းထောက်တစ်ယောက် ရှာနေတာနဲ့အတော်ပဲး)
SHWE ZIN U September 30, 2011 at 2:25 PM
ဟလို ဟလို သတင်းထောက် မလေး ရေ
အခုရော ဘာသတင်းတွေ များ ထောက်လှန်းနေလည်း သိချင်ပါတယ် ဧရာဝတီ သတင်းမှန် များပြောကြားပေးပါအုန်း
မြသွေးနီ October 3, 2011 at 11:40 AM
အလွမ်းမြို့လေး March 7, 2012 at 7:25 AM
အမီးစံရေ... သမီးလို့ မခေါ်ဘူးနော်။တော်ကြာ မေမေလို့ ပြန်ခေါ်မှာ ချိုးလို့...အဟီး
လာလည်သွားတယ်ကွယ်။ သူများတွေများ ရေးတတ်လိုက်တာ စာစီတာညီလို့။ အားပေးနေမယ်။ သတင်းထောက်လုပ်မယ်ဆိုလည်း သတိထားဦး။ သတင်းထောက်တွေက လူဦးရေတိုးလာပြီး နေရာပေးရမှာစိုးလို့ ပြသနာ အရင်ရနေဦးမယ်။ ဒိုးကန်ပြောသလို ဘာလေး ညာလေး သင်ထားနော်။ ဟဲ ဟဲ